Al-Qaacida oo markii ugu horeysay gargaar Soomaaliya ka qaybisey – SBC
Al-Qaacida oo markii ugu horeysay gargaar Soomaaliya ka qaybisey
Posted by editor on October 14, 2011 Comments
Ururka Al-Qaacida ayaa markii ugu horeysay wuxuu soo gaarsiiyey Soomaaliya gargaar dhanka raashinka ah oo loogu tala galay dadka abaaruhu waxyeeleeyeen iyadoo saxaafada loo soo bandhigey gargaarkaasi.
Sarkaal ka tirsan Ururka Al-Qaacida oo lagu magacaabo Abuu Cabdalla Almuhaajir dhalasho ahaana ka soo jeeda qaarada Aasiya ayaa Shalay galinkii dambe kumanaan dadweyne ah kula hadlayay Xerada Aala Yaasir ee ku taala deegaanka No:50 ee Gobolka Sh.hoose oo halkaasi Al-Qacida ay gargaar ka qeybisay ayaa waxa uu Sheegay ayaa waxa uu sheegay in Osama bin ladin uu si weyn ula dagaalamay dalalka Reer galbeedka gaar ahaan dalalkii ku duulay Iraq, Kashmir iyo Afghanistan.
Abuu Cabdalla ayaa waxa xusay in 30kii sano ee la soo dhaafay in Hogaamiyaha al-Qacida uu gacan weyn ka gaystay inta uusan geeriyoon kahor Sidii dalalkaasi islaamka looga xurayn lahaa dalalkii kusoo duulay oo uu hormuudka u yahay sida uu sheegay dalka Maraykanka.
“10 sano ee la soo dhaafay diirada ayuu si weyn u saaray hogaamiyihii geeriyooday ee al-Qacida Shiikh Osama bin laadin dalka Soomaaliya waxa uuna kula dagaalamay Sagaashameeyadii Ciidamadii UNISOM ee dib usoo celinta Rajadii Soomaaliya ee uu maraykanka hormuudka u ahaa,Sidoo kale waxa ay la dagaalamayn Ciidamadii Ethiopia hadana waxa ay ururweynaha al-Qacida Soomaaliya kula dagaalamayaan Ciidamada Midowga afrika ee AMISOM ”ayuu yiri abuu cabdalla Almuhaajir.
Abuu Cabdalla al Muhaajir oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu Sheegay in Xerada aala yaasir dadka kusoo barakacay ay u qeybiyeen deeq katimid ururweynaha al-Qacida gaar ahaan hogaamiyaha Cusub ee ururkaasi ayman al zawaahiri waxa uuna dadkii barakacayaasha ahaa uu u gudbiyay salaam uu ugu waday hogaamiyaha al-Qacida ee alzawaahiri oo dhamaan dadka soomaaliyeed u soo dhiibay sida uu hadalka u dhigay.
Sarkaalkaasi ayaa sheegay in xerdaasi ay hada ka qeybiyeen Deeq isugu jirto daawooyin Xijaabka ay dumarka qaataan iyo kitaabo diini ah oo ay dadka barakacayaasha ah ay baranayaan.
Al-Muhaajir oo inta uu hadalka jeedinayay ay garabtaagnaayeen hogaamiyayaal kale oo aan soomaali ahayn kuwaasoo u soo hijrooday garab siinta dagaalyahanada al-Shabab waxa uuna Sheegay in hada al-Shabab ay ku dagaalamayso daruuf adag waxa uuna kula dardaarmay dagaalyahanada al-Shabab inaan dhag jalaq usiinin warbaahinada Reer galbeedka oo uu sheegay inuu guluf ku wado kanmaletriga ah oo ay wadaan.
Sanadkaan gudahiisa markii Ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ku dilayn Pakistan Osama bin ladin ayaa waxay aheyd markii ugu horaysay oo dagaalyahano Ajaanib ah lagu arkay xaflado ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya iyagoona ka qeybgalayay Munaasabad baroordiiq ah oo Afgooye loogu sameeyay hogaamiyihii ururweynaha al-Qacida Osama Bin laden.
Dhanka kale waa markii ugu horaysay oo Al-Qaida ay si dhab u qirato in Soomaaliya dagaalada kasocda ay si weyn ugu lug leedahay, iyadoo sanadkaan gudahiisa markii Ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ku dilayn Pakistan Osama bin ladin.